Kuverenga kweIzwi uye Zvemukati Kureba Kukanganisa pane SEO | Martech Zone
Kwenguva yakareba kwenguva refu, ini ndanga ndichingoedza kubvunzana neakatanga mari uye nemakambani makuru emabhizimusi nekuti ndaiziva kuti ndaizokwanisa kufambisa tsono yekushandurwa zvakanyanya nemakambani aive nezviwanikwa uye nguva yekutora chikamu chemusika. Gore rakapera, kekutanga, ndakafunga kushandisa matekiniki mamwechetewo andakashandisa kumakambani ane matunhu, makambani madiki… uye yakave nemhedzisiro inoshamisa mukuvandudza kwavo kwekutsvaga masosi uye kutendeuka.
Pakati pesarudzo iri kudonhedza iyo yemukati yekugadzira mutsara uye, pachinzvimbo, kugadzira raibhurari yezvinyorwa. Tarisiro yedu haisi pa periodicity kana kuwanda kwezvinyorwa zvedu zvatinoburitsa kune mutengi, ndezvekutsvagisa misoro inovafadza uye inoenderana nebhizimusi… uye kuvaka zvese zvavo zvekambani masimba uye kuvimba. nevanotarisira vatengi. Iyo nzvimbo yekutarisa inobvisa iyo kambani uye, pachinzvimbo, inoisa mutengi kana bhizinesi tarisiro pakati pechirimo.
Semuenzaniso, ndine shamwari dzakanaka idzo dzine simba rakasimba uye risingadhuri real estate kushambadzira chikuva. Nezvinhu zvakaita sekushanya kwenhare, kutumira mameseji, CRM, tsamba dzeemail, uye kushambadzira otomatiki… vanogona kunge vachinyora nezve izvo maficha uye mabhenefiti zuva rega rega. Izvo zvaizoisa sisitimu yavo pamucheto wezano ravo remukati.
Asi zvaisazotyaira chinzvimbo kana shanduko.
Sei? Nekuti vashanyi vanogona kuona yavo saiti, verenga nezve kwavo maficha, uye kusaina kusaina yemuedzo account. Mazana emazano uye manomano zvinyorwa zvinogona kutora zvimwe zvikamu, asi havasi kuzoshandura.
Mushandisi Kutarisisa maringe neAlgorithm Focus
Pane kudaro, Agent Sauce inoshandira tsamba, blog, uye podcast inotarisa kumatambudziko uye mabhenefiti ekubudirira real estate agent. Vakaita hurukuro pamusoro penyaya dzemutemo, VA zvikwereti, kutamisirwa bhizinesi, nyika nemitero yemubatanidzwa, hupfumi hwedunhu, staging yemumba, kubhenekera imba, nezvimwewo. Izvo zvinongedzo zvemukati wavo hazvisi kupa matipi akawandisa anogona kuwanikwa chero kumwe kunhu; ndezve kupa hunyanzvi kubva kumaindasitiri zviwanikwa zvinozobatsira tarisiro yavo uye vatengi kutengesa zvakanyanya uye nekukudza bhizinesi ravo.
Asi hazvisi nyore. Kutanga, ivo vanofanirwa kutsvagisa kuti izuva ripi muhupenyu hwemumiriri uye nenyaya dzese dzavari kupokana nadzo. Ipapo, ivo vanofanirwa kuvaka hunyanzvi hwavo kana kuunza dzimwe nyanzvi kubatsira avo vanotarisira uye vatengi. Uye ivo vanofanirwa kuita zvese izvo vachiri kuramba vachikwikwidza neplatform yavo.
Nekudaro, iko kukanganisa kuri kuti ivo vari kuve sosi huru mukati meindasitiri uye vari kuvaka hukama hwakareba nevateereri. Nezve tarisiro, ivo vari kuve kuenda-kune zviwanikwa izvo zvavanochengeta kumusoro kwepfungwa nezvako zvemhando yezvinyorwa. Kune vatengi, ivo vari kuvabatsira kuti vabudirire uye vafare nemabasa avo.
Zvemukati-Kureba Kupesana Nehunhu Hwemukati
Kumbira vanyori vazhinji kuti vawane chitauro yekutsvaga uye kunyora chinyorwa, uye mhinduro yacho yakajairika:
Chii chinonzi izwi kuverenga uye nguva yekupedzisira?
Mhinduro iyoyo inondiuraya. Hezvino izvo zvinofanirwa kuve mubvunzo.
Ndivanaani vateereri uye chinangwa ndechei?
Panguva iyoyo, munyori anogona kuita ongororo yekutanga pamakwikwi, zviwanikwa, uye hunhu hwevateereri uye anodzoka aine fungidziro pakupedzisa kwechinyorwa uye mutengo. Ini handina basa nehurefu hwemukati; Ndine hanya nazvo kunyatso gutsikana. Kana ndiri kutsikisa chinyorwa chine musoro wenyaya, ini ndoda kupindura mubvunzo wese une chekuita nezvakanyorwa. Ini ndoda kupa zvimwe chokwadi uye manhamba. Ini ndoda kuisa madhayagiramu, machati, mifananidzo, uye vhidhiyo. Ini ndoda kuti chinyorwa chive chakanakisa chinyorwa paInternet.
Uye kana tikaburitsa yakazara, yakanyatso tsvagisirwa, chinyorwa chiri nani kupfuura chero chimwe chinyorwa, icho chinyorwa chemukati chemukati chinowanzove chakareba, hongu. Mune mamwe mazwi:
Nepo urefu hwemukati huchienderana neinjini yekutsvaga chinzvimbo uye shanduko, hazviite chikonzero chinzvimbo chiri nani uye shanduko. Kuvandudza zvemukati zvemukati zvinokonzeresa nani masosi uye shanduko. Uye zvemukati zvemukati zvinowirirana nehurefu hwemukati.
Tine izvi mupfungwa, ngatitarisei kuwirirana (kwete causation) yehurefu hwemukati, yekutsvagisa injini, uye shanduko mune ino yakazara infographic kubva kuCapsicum Mediaworks, Maitiro Ehurefu Hwechokwadi Anobata Sei SEO uye Shanduko. Yakakwira-mhando zvemukati zvinoitika kuve ne kuverenga kwemashoko kwakakwirira chinzvimbo chiri nani, chakagovaniswa zvakanyanya, chinoreba kwenguva refu, chinopinda zvakadzika, chinowedzera shanduko, zvinotyaira zvinotungamira, uye zvinoderedza mabhureki emitengo.
Mhedziso yakakosha; mhando yakareba-fomu zvemukati ndeye mari iri nani.
Tags: zvemukati infographicurefu hwemukatizvemukati zvemukatichinzvimbo chemukatitsvakiridzo yezvirimozvemukati kuverenga kuverengakutendeukaKusvika papimazwi manganisei chinzvimbo naniinfographicyakareba fomu zvemukatiunhuchepamusorotsvakurudzoseokunyatsoitashoko count
Nei Kambani Yako Ichifanira Kubhadharira Yakagadziriswa DNS?